Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Jery ​​World Network Network momba ny fizahan-tany sy ny fampihorohoroana
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • LGBTQ • Vaovao • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany • WTN
Ny korontana sy ny fampihorohoroana anio ao amin'ny
Hamid Karzai International Airport any Kabul, Afghanistan ary ny akaikin'ny Baron Hotel dia mpanakalo lalao ihany koa ho an'ny Indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany efa marefo.
Ny filohan'ny World Network Network, Dr Peter Tarlow, dia namoaka tatitra tamin'ny fomba fijeriny.
Ny fanafihana andro any Kabul, Afghanistan dia fanafihana ny fizahantany manerantany ihany koa.
Ny Aogositra 26th ny fanafihana ny sivily ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Kabul izay manandrana hiala an'i Afghanistan dia fampahatsiahivana bebe kokoa ny amin'ny maha-mampidi-doza ny raharaha any Afghanistan.
Amin'ny daty farany nandehanan'i Etazonia sy ireo mpiara-dia aminy avy any amin'io firenena io dia zava-dehibe ny hisian'ny fikajiana lalina ireo matihanina amin'ny sehatry ny fizahan-tany ary handinika ny mety ho fiantraikan'ny fandresen'ny Taliban teo amin'ny tontolon'ny fizahantany.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany mahatsapa fa zava-dehibe ho an'ity sehatra manerantany ity ny tsy hahavoa ny fampandrosoana manerantany momba ny COVID, ny fanovana ny toetrandro ary ny fandrahonana amin'ny fampihorohoroana.
Filoha WTN Dr. Peter Tarlow izay manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny fiarovana amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany koa dia manoratra:
Ny fizahantany dia tsy misaraka amin'ireo krizy manerantany ankehitriny
Na dia hisy lahatsoratra marobe momba ny fitrandrahana an'i Taliban an'i Afghanistan nosoratana tamin'ny fomba fijery ara-politika dia matetika tsy azo atao ny manavaka ny tontolon'ny hetsika politika amin'ny tontolon'ny fizahantany. Ohatra, ny fanafihana nataon'i Al Qaeda tamin'ny volana septambra 2001 dia hetsika ara-politika, fa ny vokatra dia toekarena eo noho eo ho an'ny fizahan-tany ary ny indostrian'ny fizahan-tany dia mbola mahatsapa roapolo taona taty aoriana ny fiverenan'ny 11 septambra 2001. ny septambra 2021 dia tsy hanamarika roapolo taona fotsiny ireo fanafihana antsoina koa hoe 9-11 (11 septambrath) fa ny fiandohan'ny vanim-potoana mety ho vaovao sy mampidi-doza kokoa ho an'ny tontolon'ny fizahan-tany.
Tsy misy mahalala izay ho endrik'ity tontolon'ny fizahan-tany ity ao anatin'ny 6 volana, herintaona, na roa taona manomboka izao. Ny indostrian'ny fizahantany dia mora tohina amin'ny hetsika ara-politika na ara-toekarena tsy ampoizina na tsy ampoizina izay antsoina matetika hoe hetsika mainty ".
Raha ny fifandraisana mandroso dia toa mihalehibe hatrany izao tontolo izao, ary ny hetsika hanjary eran'izao tontolo izao dia hita eo no ho eo fa toa mitombo arakaraka ny fotoana ny isan'ny hetsika soavaly mainty.
Ireo tranga ireo dia matetika misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitsika, na amin'ny fahafinaretana na amin'ny orinasa. Ireo tompon'andraikitra misahana ny fizahantany dia mila mahatsiaro hatrany fa ny onjan'ny tantara dia tsy hetsika tokana, fa potpourriels an'ny hetsika. Mampihomehy ireo fifangaroana ireo dia toa tsy dia nisy talohan'ny nisehoan'izy ireo fa raha vao niseho izany dia toa ny fahitana azy no valiny lojika.
Ny zava-nitranga tamin'ny faran'ny fahavaratra tamin'ny 2021 dia maneho an'io mélange ny hetsika io ary avy amin'ny fizahantany, ny fomba fijerin'ny indostria dia mitaky famakafakana feno fandinihana. Na dia manoratra an'ity lahatsoratra ity amin'ny fomba fijerin'i Etazonia aza aho, raha ny tena izy dia maro amin'ireo onja manan-tantara ireo no hisy fiatraikany amin'ny indostrian'ny fizahantany manerantany.
Ny fahavaratry ny 2021 dia feno fanamby vaovao sy tsy voavaha. Ohatra, ny indostrian'ny fizahantany dia nanantena fa amin'ny faran'ny fahavaratry ny hemisphere avaratra dia ho lasa ampahany amin'ny tantara ny areti-mandringana COVID-19 fa tsy fanamby mitohy.
Ny Delta Variant amin'ny valanaretina COVID dia namarana izany fanantenana izany.
Tamin'ny volana aogositra 2021 dia nikatona ny ankamaroan'izao tontolo izao tamin'ny olana toy ny fanaovana vaksiny na tsia ary raha ilaina ny fitifirana fahatelo. Enim-bolana lasa izay, tsy nisy olona, ​​na olona vitsy dia vitsy, naheno momba ny fihenan'ny Delta an'ny COVID.
Miroborobo ny foibe fizahan-tany, toa an'i Hawaii, ary antenaina fa hitsangana tsy ho ela ny indostrian'ny fitsangantsanganana.
Fa kosa, mamaky lohateny toy izao izahay: "Ny Governemanta Hawaii dia mamaky fitsangatsanganana any amin'ny fanjakana eo afovoan'ny Uptick amin'ny tranga COVID-19" (magazine Travel & Leisure), na Ny famandrihana Hawaii Travel izao dia fanapahan-kevitra momba ny fiainana sy ny fahafatesana. (eTurboNews)
Ity fitomboan'ny tranga covid ity dia mitranga amin'ny fotoana iray i Etazonia (sy ny ankamaroan'izao tontolo izao) dia miaina ny fiakaran'ny vidim-piainana ratsy indrindra am-polony taona maro.
Lohateny toy ity manaraka ity avy amin'ny CNBC (Jolay 2021) "Ny fiakaran'ny vidim-piainana dia avo kokoa noho ny nandrasana tamin'ny volana Jona raha miakatra 5.4% ny vidin'ny vidin-javatra" milaza izay efa fantatry ny olona mpivarotra rehetra. Zava-dehibe indrindra ny fahafantaran'ny tompon'andraikitra fizahan-tany ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidim-piainana satria ny olona salama efa misotro ronono dia manoratra ampahany betsaka amin'ny indostrian'ny fizahantany fialamboly. Ity ampahan'ny vahoaka be dia be ity dia mivelona amin'ny fidiram-bola raikitra ary manelingelina manokana ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Ny krizy fanampiny iray misy fiantraikany amin'ny indostrian'ny fizahantany dia ny heloka bevava
.Ohatra ao amin'ny lahatsoratry ny BBC tamin'ny 7 Jolayth momba ny heloka bevava any Amerika dia milaza hoe: “The New York Times nijery tanàna 37 manerana an'i Etazonia miaraka amin'ny angon-drakitra nandritra ny telo volana voalohany tamin'ity taona ity (2021), ary amin'ny ankapobeny dia nisy 18% ny fitomboan'ny vono olona raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2020. "
Ny lohateny lehibe eran'izao tontolo izao dia manakana ny fandehanana any Etazonia raha vantany vao misokatra ny sisin-tany. Ny onjan'ny heloka bevava koa dia nisy fiatraikany tamin'ny fitsangatsanganana an-trano tany amin'ireo tanàna any Etazonia toa an'i Chicago, Portland, Oregon, Miami, Houston, San Francisco, Seattle, Washington, DC, ary New York City.
The fanafihana ny seranam-piaramanidina Kabul anio dia manasongadina ny zava-misy fa miatrika fandrahonana vaovao izao ny fizahantany.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy mahalala tsara ny hamonoan'ny Taliban an'i Afghanistan amin'ny fizahan-tany manerantany.
Ny fantatsika dia izao: eo ambany fifehezan'ny vondrona mpampihorohoro iray i Afghanistan ankehitriny. Ny fanjakan'ny Taliban tany Afghanistan dia roa-polo taona lasa izay dia nanjary fialofana azo antoka ho an'ireo mpampihorohoro Al-Qaida sy fanafihana marobe amin'ireo tanjona kendrena ara-politika sy fizahantany toa ny World Trade Center any New York.
Ny zava-misy fa fehezin'ny vondrona Islamika fundamentalista izao dia mampiavaka ny toe-draharaha tsy mitovy amin'ny olana hafa ankehitriny, indrindra fa ny fizahantany dia lasa anton'ny fanafihana fampihorohoroana. Ny mety ho an'ny mpampihorohoro manisy ratsy ny indostrian'ny fizahantany dia lehibe kokoa noho ny tamin'ny fotoana rehetra taorian'ny fanafihana 9-11.
Famintinana haingana ny sasany amin'ireo fanamby izay midika hoe fianjeran'i Afghanistan ho an'ny fizahan-tany manerantany:
Mety hihasarotra sy hampidi-doza kokoa ny dia. Ny zava-misy misy olona an'arivony maro ankehitriny izay efa nandao an'i Afghanistan dia midika fa misy ny mety ho ampahany amin'ireo olona ireo farafahakeliny ao amin'ny efitrano fatoriana ary ny governemanta dia tsy maintsy handray fepetra fanampiny mandra-pahatongany mazava hoe iza no fitsangatsanganana ary amin'ny toe-javatra inona.
Ny sisin-tany amerikana-mexico, izay efa mampidi-doza, dia vao mainka hampidi-doza. Etazonia nandritra ny fito volana lasa dia nanan-kery politika "malalaka-sisintany". Ny mpifindra monina tsy misy na tsy voazaha toetra dia miditra any Etazonia avy amin'ny firenena tia namana sy tsy tia namana. Ny sasany amin'ireto olona ireto dia tonga noho ny antony fialokalofana politika na fanararaotana ara-toekarena. Ny sasany dia mety ho avy noho ny antony tsy dia miabo ary indray mandeha any Etazonia dia afaka mandehandeha any amin'izay tiany izy ireo. Ity fifindra-monina tsy misy fitsaharana tsy an-kijanona ity dia efa niteraka ny firongatry ny asan-jiolahy sy ny aretina anisan'izany i Covid.
Tokony hanantena ny fitomboan'ny mpitsoa-ponenana tsy voaroaka i Eoropa izay hanohy hahatonga an'i Eropa tsy ho voaro intsony ary tsy dia manintona ny mpitsidika. Ny vokatra dia ny fihenan'ny fari-piainan'ny eoropeanina sy ny kalitaon'ny fiainana.
Hitombo ny loharanom-bolan'ny Taliban 'fidiram-bola, rongony tsy ara-dalàna ary indrindra ny famokarana mahery fo, ary izany fisondrotana izany dia hiteraka olana eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Ny “tantsaha mpamokatra rongony” dia tsy hatahotra zavatra hafa intsony ankoatry ny mpamory hetra ary ny vokatr'izany dia mety ho fitomboana lehibe amin'ny fivarotana zava-mahadomelina (ary angamba hatramin'ny firaisana) manerantany, indrindra any amin'ireo firenena tandrefana. Ireo firenena ireo no mamokatra ny ankamaroan'ny fizahan-tany manerantany.
Ny fikorontanan'i Etazonia tampoka avy any Afghanistan sy ny tsy fahampian'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-dia aminy dia mety hiteraka firaiketam-po amin'ny firaisan'ny OTAN tamin'ny fotoana nanombohan'ny fizahan-tany ny fandrahonana fampihorohoroana. Ny indostrian'ny fizahantany dia mila miasa miaraka amin'ny masoivohom-panjakana maro manohitra ny fandrahonana vaovao amin'ny fampihorohoroana na ny heloka bevava.
Ny zava-misy fa mahita ny amerikana osa izao ny sinoa dia mety hampirisika hanafika an'i Taiwan na faritra hafa amin'ny ranomasina China South. Ny haavon'ny tsy fandriam-pahalemana toy izany dia mety handratra ny fanarenana fizahan-tany ihany na amin'ny sisin'ny Pasifika Aziatika na amin'ny firenena atsimon'i Azia Ny fizahan-tany amin'ity faritra ity dia mety ho anjakan'ny Sinoa sy ireo firenena toa an'i Korea Avaratra mety ho sahy hanao fihetsika tsy mitandrina. Tokony ho tsaroana fa ny ankamaroan'ny entana eto amin'izao tontolo izao dia mandeha amin'ny sambo ary mety hanafika ny làlan-dranomasina lehibe ny fiakaran'ny vidin'ny fitaterana.
Ny fianjeran'i Kabul dia antso fanairana ho an'ireo mpitantana fizahantany. Tsy amin'ny fotoana hampihenana ny filaminan'ny fizahan-tany izany fa kosa drafitra mandritra ny fotoana mety ho sarotra.
Ireo mpitarika fizahan-tany dia mila miara-miasa amin'ny governemantany, ireo masoivohon'ny mpampihatra lalàna, sy ireo minisiteran'izy ireo ara-pahasalamana mba hamoronana fepetra ho an'ny indostrian'ny fizahantany mihitatra sy fiarovana sy filaminana bebe kokoa.
Tsy fotoana mora izany, fa ny indostrian'ny fizahantany hahavelomana dia tsy maintsy miatrika zava-misy, tsy maintsy miomana amin'ny ratsy indrindra, nefa mivavaka ho an'ny tsara indrindra ary miasa hampivondrona ny olona.
Momba ny tambajotran'izao tontolo izao fizahan-tany (WTN)
WTN dia feo efa ela niverenan'ireo orinasa kely sy salantsalany amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany. Amin'ny fampitambarana ny ezakay dia avo lenta ny filàna sy ny hetahetan'ny orinasa kely sy salantsalany ary ireo mpandray anjara aminy.
Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny maha-mpikambana sy hetsika dia mankany www.tv.travel